Apple oo baaraysa app ay dawladda Sacuudigu leedahay - BBC News Somali
Tim Cook oo waraysi siiyay NPR ayaa sheegay in uusan ka war haynin Absher app balse uu dib u eegi doono.
App-kan oo laga helo adeegyada dawladda waxaa dhaliilay kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda.
Ron Wyden oo ah seneter ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku baaqay in Apple iyo Google ay aaladahooda ka saaraan App-kaas.
Qaramada Midoobay: Sacuudiga 'ayaa xannibay' baaritaanka dilkii Khaashuqji
Dumarka Sacuudiga ayaa ogolaansho rag u baahan marka ay damcaan in ay dalka dibaddiisa aadaan, caadiyanna waxaa fasaxa aabayaashood ama ninkooda.
Absher app oo loo qaabeeyay in laga helo adeegyo caafimaad sida cusboonaysiinta ruqsadda baabuur wadidda, ayaa aad u sahlaya in dumarka laga hor istaago ama loo fasoxo safarrada, waxaana sidaa la samayn karaa iyadoo taleefannada caaqilka ah (casriga ah) la adeegsanayo.
Image caption Agaasimaha guud ee shirkadda Apple ayaa sheegay in ay baarayaan eedaynta loo jeediyay Sacuudiga
App-kan waxaa markii hore naqshadeeyay wasaaradda arrimaha gudaha, sannado badan ayaa la isticmaalayay waxaana la soo dajistay in kabadan hal milyan oo jeer.
Baaritaan ay samaysay barta Insider ayaa daaha looga rogay sida ragga muxramka ah ay u diiwaan galinayeen xaasaskooda, walaalahood iyo gabdhahooda si ay uga hor istaagaan ama ugu fasaxaan safaradda dalka dibaddiisa ah.
Ninka ayaa heli fariin u sheegaysa in qof dumar ah oo ku tiirsan ay rabto in ay dalka dibaddiisa u safarto.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa warbaahintaas u sheegtay in "App-kaas oo kale uu gacan ka gaysan karo ku takrifalka xuquuqda aadanaha, oo ay ka mid tahay faquuqidda dumarka.
Xildhibaan Wyden oo ka jawaabaya warkan soo yeeray ayaa warqadda furan ee uu diray ku qoray "waa war qalafsan in boqortooyada Sacuudigu ay raadinayso in ay xayirto oo caburiso dumarka dalkooda, balse ma aha in shirkadaha Maraykanku ay gacan siiyaan qoryasha Sacuudiga."